==အဆိုတော်ခင်ဝမ်းရဲ့ ကဗျာ ၄ ပုဒ်==
Green Hermony by Khin One (Magic-Art Art Gallery) .
ဪ၊ မင်းကို ရည်ညွှန်းဆိုမိတာပါ
ခင်ဝမ်း (၁၉၉၃) . . .
ကြည်လင်တဲ့ မှန် ၆ချပ်ကိုဖြတ်ပြီး
သွားနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ...
စိတ်က ခေါင်မိုးဆီ ရောက်သွားတော့
ကျနေသံ ကြားလိုက်ရတယ် ...
ရုံးခန်းတခုရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ အိပ်နေတာပါ..။
(Credit to : emotionalcorner.blogspot.com) . .
ငွေမိုးလေး ရွာနေတယ်။ ။
(Credit to : smsy.mmwordpress.com) . . .
အရောင်အဆင်းကိုစောင့်ရှောက်အပ်သော ရန်သူကိုပယ်ပျက်တတ်သော မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော မဟာဂန္ဓာရီသည် ကျွန်ုပ်အား မြင့်မြတ်သောအကျိုးစိးပွားတို့ရှိရာ ကမ်းတစ်ဘက်သို့ ပေးအပ်ပါစေသတည်း။ ။
Posted by JACBA at 7:17 AM